Maalinta Xuquuqda Dadka Oo Muqdisho Laga Xusay Loogna hadley Dilka Suxufiyiinta Soomaaliya - Horseed Media
Maalinta Xuquuqda Dadka Oo Muqdisho Laga Xusay Loogna hadley Dilka Suxufiyiinta Soomaaliya December 10, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleIyada oo ay maanta ku beegan tahay maalinta loo asteeyey Xuquuqda Aadamaha ayaa si weyn looga xusay magaalada Muqdisho.
Shirka waxaa ka soo qaybgalay qaar kamid ah golaha Xukuumadda ee Dawladda Soomaaliya, Ergayga Qaramada Midoobey Soomaaliya u qaabilsan Dr.Augistine Mahiga iyo ergooyin kale oo ka socda beesha caalamka, ururada u dooda Xuquuqda dadka, bahda saxaafadda iyo martisharaf kale oo badan.
Kulanka maanta ayaa diirada lagu saarey xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliyeed oo si weyn loogu xadgedbey sanadkan iyada oo la diley 18 suxufi, la dhaawacay qaar kale kuwan xabsiyada ku jiraan.
Ergayga Qaramada Midoobey Dr.M;ahiga ayaa sheegay in siyaabo kala duwan loo beegsado suxufiyiinta, isla amrkaana dhamaan ay isugu imaanayaan inj la aamusiyo codka shacabka iyo in aysan soo bixin dhibaatooyinka musuqmaasuqu lee yahay, sidoo kale waxa uu tilmaamey in kuwa ka soo horjeedo horumarka ay gaarayaan ciidanka Soomaaliya in la baahiyo ay qayb ka yihiin beegsiga suxufiyiinta.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi ayaa isaguna sheegay in ay aad uga xunyihiin dhibaatooyinka s anadkan oo keliya gaarey saxaafadda, isla markaana la samayn doono baaritaan ku aadan waxa ka danbeeya beegsiga suxufiyiinta iyada oo madaxweynaha Soomaaliya uu muhimad gaar ah siiyey arintaas. Ciilmooge ayaa sheegay in dawladdu xoog saari doonto in ay ka hortagto dhibaatooyinka ka dhanka ah warfidiyiinka.
Shirkan oo ahaa kii u horeeyey ee noociisa oo kale ah oo Muqdisho lagu qabto ayaa waxaa soo abaabuley Midowga Yurub si xal loogu helo suxufiyiinta dhibaateysan ee maalinkasta la beegsanayo.